प्रचण्डलाई षडयन्त्रको बाहक नबन्नुस भन्दै गोपाल किरातीले चोर औला ठडाएपछि ! – YesKathmandu.com
गोपाल किराती,प्रदेश नं.१ इन्चार्ज,माओवादी केन्द्र
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मधेस केन्द्रित दलहरु राजतन्त्रकालीन पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न उद्दत छन् । यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यदि यसो भयो भने त्यसविरुद्ध हामी उत्रन्छौं ।
यदि पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिए माओवादी केन्द्र १ नम्वर प्रदेशका नेता कार्यकर्ता निर्वाचनमा भाग लिने छैंनन् । यो बुझै । जनताको रगत र पसिनावाट प्राप्त गणतन्त्र लगायत उपलव्धी गुमाउने षड्यन्त्र अनुसार पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने खोजिएको हो । यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।
२००७ सालको प्रजातन्त्रलाई २०१७ सालमा खोसिएको थियो के अब त्यस्तै गर्न लागेकोह हो ? प्रतिगमनकारी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने षडयन्त्रको बाहक नबन्नोस तपाई ( प्रधानमन्त्री)। आम कार्यकर्ता र जनताको कुरा नसुन्ने हो भने हामी विद्रोह गर्न पनि तयार हुनेछौं ।
कुलो खन्नेक्रममा पहिरा जाँदा सुर्खेतमा ५ जनाको मृत्यु